San Cornelio, Saint nke ụbọchị Septemba 16 | Blọọgụ nke ekpere
San Cornelio, Saint nke ụbọchị 16 Septemba
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 16, 2020 Septemba 16, 2020
Akụkọ banyere San Cornelio
Enweghi onye pope ruo onwa iri na ano mgbe e gbusiri okwukwe nke St Fabian n'ihi oke mkpagbu nke Uka. N’oge ezumike ahụ, ndị ụkọchukwu na-achịkwa Chọọchị. Saint Cyprian, enyi Cornelius, na-ede na a họpụtara Cornelius popu “site na ikpe nke Chineke na Kraịst, site na nkwenye nke ọtụtụ ndị ụkọchukwu, site na ntuli aka ndị mmadụ, na nkwenye nke ndị ụkọchukwu meworo okenye na ndị ezigbo mmadụ. "
Nsogbu kasịnụ nke okwu afọ abụọ Kọniliọs dị ka pope metụtara Sakramenti nke penance ma lekwasị anya na nlọghachi nke ndị Kraịst jụrụ okwukwe ha n'oge mkpagbu. Na njedebe, a mara ma oke abụọ ikpe. Cyprian, primate nke North Africa, rịọrọ popu ka ọ kwado nkwenye ya na enwere ike idozi nlọghachi ahụ na mkpebi bishọp.
Otú ọ dị, na Rom, Kọniliọs hụrụ ihe dị iche. Mgbe a họpụtasịrị ya, otu ụkọchukwu aha ya bụ Novatian (otu n’ime ndị chịburu Chọọchị ahụ) nwere bishọp na-ama ya aka na Rom, bụ́ otu n’ime akwụkwọ ndị mgbe ochie, doro nsọ. Ọ gọrọ agọ na Chọọchị nwere ikike ime ka ọ bụghị naanị ịdapụ n’ezi ofufe dapụ, kamakwa ndị ikpe igbu ọchụ, ịkwa iko, ịkwa iko ma ọ bụ alụmdi na nwunye nke abụọ! Cornelius nwere nkwado nke ihe ka ọtụtụ n'ụka (ọkachasị ndị Saịprọan nke Africa) n'ịkatọ Novatian, n'agbanyeghị na ịrọ òtù ahụ dịgidere ruo ọtụtụ narị afọ. Cornelius nwere nzukọ ndị isi na Rome na 251 ma nye iwu ka eweghachitere "ndị ikpe mejọrọ" toka na ọgwụ eji echegharị "mbụ."
Enyi na Cornelius na onye nke Saịprọan nwere nsogbu ruo nwa oge mgbe otu n’ime ndị iro Saịprọs boro ya ebubo. Ma e doziri nsogbu ahụ.
Ihe odide nke Cornelius na-egosi ndọtị nke nzukọ na Chọọchị Rome ruo etiti narị afọ nke atọ: ndị ụkọchukwu 46, ndị deacon asaa, ndị okpuru asaa. E mere atụmatụ na ọnụ ọgụgụ ndị Kraịst ruru ihe dị ka 50.000. Ọ nwụrụ n'ihi ọrụ ndọpụ nke ya n'obodo ugbu a bụ Civitavecchia.
Ọ dị ka eziokwu zuru oke ịsị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozizi ụgha ọ bụla enwere ike ịtụpụtala n'otu oge ma ọ bụ nke ọzọ n'akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị. Narị afọ nke atọ hụrụ mkpebi nke otu nsogbu nke anyị na-adịkarịghị ịtụle: ntụgharị nke a ga-eme tutu eme ka anyị na Nzukọ-nsọ ​​dị na mma mgbe anyị nwesịrị mmehie na-anwụ anwụ. Menmụ nwoke dị ka Cornelius na Cyprian bụ ngwa ọrụ Chineke nyere ndị findka aka ịchọta ụzọ amamihe dị n'etiti oke echiche ike na adịghị mma. Ha bụ akụkụ nke ndụ mgbe niile nke ọdịnala Churchka, na-eme ka a ga n'ihu nke ihe Kraịst bidoro ma na-atụle ahụmịhe ọhụụ site n'amamihe na ahụmịhe nke ndị gabigara n'ihu.
← Na post gara aga Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na njikere ị dị ige ntị
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 16 Septemba 2020 na okwu Pope Francis